L’autostima | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » L’autostima
Posted by ムラカミ on Aug 9, 2012 in Business & Economics, Marketing, Think Different | 19 comments
ပထမဆုံး သည်ပိုစ့်ရေးဖြစ်ပုံအကြောင်း ..နည်းနည်း ရှင်းချင်ပါတယ်..
သည်ပုံတွေကို စာရေးမယ် ဆိုပြီး တင်ထားလိုက်တာ ..အတော်တောင် ကြာသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်..
လိုကယ်က ..ဂျူနီယာ ညီမ တစ်ယောက်က သူ့ စာတမ်း အတွက် လိုတာလေးတွေ လှမ်းအကူအညီတောင်းလို့
ဟိုက သည်က ယူထားတဲ့ ပုံတချို့ ဖြစ်ပါတယ်…
အဲ့ဒါတွေ ခန တင်ထားရင်းနဲ့ စာရေးမယ် စိတ်ကူးမိသော်လည်း ..
ဘယ်လို ဆက်စပ်ပြီး ရေးမယ်… ဘာကို ဇောင်းပေးပြီး ပြောမယ်
အတွေးမရလို့ မရေး ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်…။
သည်စာစုဟာ နည်းနည်းတော့ တက္ကနစ်ကယ် ပိုင်း ဇောင်းပေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကနဦး
၀န်ခံလိုပါတယ်.. ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကတော့ …
ကျနော် အလွန်နှစ်သက်တဲ့ စာအရေးကောင်းသူ ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့
ဆုငွေ (၁၀) သိန်းကျော် ချီးမြှင့်မည့်အစီအစဉ်
ဆိုတဲ့ ပိုစ့်နဲ့ …
ဆိုတဲ့ ပိုစ့် ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. …
တကယ်တော့ ..ကျနော့်မှာ ဘောင်တွေ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွေ တပုံတခေါင်းရှိပါတယ်..
အဲ့ဒါကတော့ ကိုဖုန်းကျော်ကြီး ပြောခဲ့ ရေးခဲ့သလို
အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာပိုင်းတွေ မပါအောင် မထည့်ဖြစ်အောင်လည်း..
ပြောရရင် ပလဲင်န်နင်း ဘက်က ကိစ္စ တချို့ ကို တာဝန်ယူရပြန်လေတော့….
ကိုယ်တိုင် လေ့လာရင်း-သင်ယူရင်းမေးရိုးကြမ်းပြင်ရိုက် .. ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ အပြုအမူ အတွေးအခေါ်
အလုပ်အကိုင်တွေကို တွေ့ရတော့ ဖောက်သည်ချချင်ပေမယ့် …. ဆင်ခြင်ရတာတွေရှိပါတယ်..
ခုတလော မအားလို့ ..ကိုယ်ရေးတဲ့ပိုစ့်တောင် ကိုယ် နပ်မှန်အောင် ပြန်မမန့်နိုင်တာလည်း
ရှိနေပါတယ် …နောက် ၂ပါတ်နေလို့ ..အချိန်ပြန်ရတဲ့အခါ ကျကျနန ရေးဖြစ်ဦးမယ်မှတ်ပါတယ်…
အတိတ်က ပလန်င်နင်း ပိုင်း က မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ ကိစ္စတွေ …လုပ်ပြီးသွားတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့
မလုပ်နိုင်လို့ လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ အကြောင်းပါ…။
ထားပါတော့ …။ ဟုတ်ကဲ့ စပါမယ်..။
အခု အောက်က ပုံအကြောင်း စပြောပါ့မယ်..
သဂျီးတို့ အမေဒစ်ကင်န်မှာ ၂၀၀၈ မှာ စီးပွားပျက်ကပ် စဖြစ်ပါတယ်..
၂၀၀၉ အတွင်းမှာ တစ် ကမ္ဘာလုံးကို ရိုက်ခတ်ပြီး လေးမင်န်းရှော့ခ် အဖြစ်
သမိုင်းတွင်တဲ့ ..ကမ္ဘာကျော် စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်မှု ကြီး recession
အနှီ Recession နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး နယ်ပယ်စုံ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေ က
မျိုးစုံ သုံးသပ် တွေးခေါ် ကြိုးစား ရုန်းကန်ကြရပါတယ်.. ။ စာအုပ်တွေ
အယူအဆတွေ လည်း အများကြီး ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့သည့်မှာ နာမည်ကျော်တဲ့ ကဆင့်ကလျားဖြစ်မှု ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း နဲ့
ကမောက်ကမ ခေတ်ရဲ့ မားကတ္တင်း လို့ အမည်ရတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် ထွက်လာပါတယ်..
အဲ့သည့် စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုသူက ခေတ်ပေါ် မားကတ္တင်း ရဲ့ ဖခင် လို့ ပြောနိုင်တဲ့
Dr.Philip Kotler ဖြစ်ပြန်လို့ ..အလွန် ရောင်းအား ကောင်းခဲ့တဲ့ တွင်ကျယ်ခဲ့တဲ့
အဲ့သည့် ဆြာကြီး အဖွင့်မှာ ပြောသွားတာကတော့ အလွန် အင်မတန် ရှင်းပြီး
ပြတ်သားလွန်းလို့ ..နည်းနည်း ဘာသာပြန်ပြီး ..ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်..
(အနှီ စီးပွားပျက်ကာလမှာ) ရှေ့လျောက် ဘာဖြစ်မယ် ..ဘယ်လိုပြန်ကောင်းမယ်..
ဘာတွေ ကြုံမယ် ဆိုတာမျိုး လာပြောတဲ့ စီးပွားပညာရှင် ရှိရင် … မယုံပါနဲ့ …
ဒါဟာလိမ်ညာမှု သက်သက်ပါ ..ကျုပ်ကိုလာမေး ရင်လည်း … မသိဘူး လို့ပဲ
ဆိုလိုချင်တာက …သည်ဘိုးတော်က တိုက်ခိုက်လိုစိတ် …သက်သက်နဲ့
ပြောခဲ့ရေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ..အောက်က ပုံက သက်သေခံပါတယ်..
တကယ်တမ်း သူပြောချင်ခဲ့တာက … နေရာ-ဒေသ-စီးပွားပုံစံ-ဈေးကွက်အခြေအနေ-
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း အလွန်အမင်း ကွဲပြားခြားနားကြမှာ ဖြစ်တာမို့ ..trend တခုပုံစံ
ပြောပြလို့ မရစကောင်းဘူး …ကိုယ့် အ၀န်းအ၀ိုင်းလေး အတွက် ကိုတော့ဖြင့်..
(သူချပြထားတဲ့ပုံလို) အတိအကျ analyze လုပ်ယူရင် ..ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ပြီး
တတ်နိုင်သလောက် ပြည့်စုံအောင် စီစဉ်ထားရင် တော့ … အဆိုပါ
မငြိမ်မသက်တဲ့ ကစဥ့်ကလျား ခေတ်မှာ မားကတ္တင်း လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း
သည်ပုံက အနှီ စာအုပ်ရဲ့ ကြော်ငြာ website ကယူထားတာဖြစ်ပြီး
MS_Office ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ Smart_Object ရုပ် သိပ်ပေါက်ပါတယ်..
တကယ်တမ်း စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာက ပိုမို ရှုပ်ထွေး နက်နဲပြီး …
Marketing Pro တွေတောင် နားလည်အောင် အတော်လေး အားစိုက်ရပြီး
အသုံးချနိုင်ဖို့ အတော်လေး အချိန်ပေးရတဲ့ စာအုပ်၁အုပ်ဖြစ်ပါတယ်..
(ထားပါတော့ စာအုပ်ကြော်ငြာ သလိုဖြစ်နေလို့..)
(လက်တလော ပြည်တွင်း ဈေးကွက် အခြေအနေ အတော်များများနဲ့
လိုက်ဖက်မှု ရှိတယ် ထင်လို့ သည်ပုံကို တင်ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း …)
၁။ အပြောင်းအလဲတွေ မတည်ငြိမ်မှုတွေ စဖြစ်ပါသတဲ့ …
– အဲ့သည်မှာ အဓိကကျတဲ့ Scenario တွေ ချရေးပြီး Plan တွေ လုပ်ထားပါ လို့ ဆိုထားပါတယ်..
1.1 Construct key scenarios; scenario analysis and planning
ဒါဟာ What if? သဘောတရားပါ … ပုံထဲမှာ မပါပေမယ့် ..စာအုပ်ထဲမှာတော့…
Detectable Turbulence နဲ့ Undetectable Turbulence ဆိုပြီး ၂မျိုးခွဲပြောထားပါတယ်..
Detectable ကတော့ … ငွေလဲဈေး အတက်ဘက်- အကျဘက် ဦးတည်နေသလား..
၀ယ်လိုအား-ရောင်းလိုအား အတက်-အကျ ဘက်ဦးတည်နေသလား..
ကုန်ကြမ်းဈေး ဒါမှမဟုတ် ကုန်ချော ထုတ်လုပ်မှု စရိတ် အတက်-အကျ ဘက် ဦးတည်နေသလား
ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး Undetectable ကတော့ ရုပ်ချည်း အစိုးရ ပေါ်လစီ ပြောင်းလဲ တာမျိုး
ကို ဆိုလိုချင်ပုံ ရပါတယ်…။
ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ စီစဉ်ပြင်ဆင် ထားဖို့ အဆင့် လို့ ပြောချင်ပါတ…
1.2 Develop Chaotics Modulated Strategy hedging risk and corresponding to key scenarios
သည်အပိုင်းကတော့ .. နားလည်ရခက်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်သလို ကျယ်လည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်…
သဘောပေါက်လွယ်အောင် … သဂျီးတို့ဆီက နာမည်ကျော် ကားကန်ပနီအကြောင်း case ရေးချင်ပါတယ်..။
သူတို့ဆီမှာ ကားတွေကို SUV ကွ၊ ထော်လာဂျီ ကွ၊ အီကို ကွ၊ ဗင် ကွ၊ ဆီဒင် ကွ ဆိုပြီး ၊
ဒီပါ့မန့် ပုံစံ နဲ့ သွားပါသတဲ့ … ကန်ပနီရဲ့ ၀င်ငွေ ROI တွေကို ..အဲ့သည့်လို ဒီပါ့မန့် အလိုက်
R&D မှာ သုံးစွဲစေပါသတဲ့….။ ခေတ်က ပြောင်းနေတာပါ …. လူတွေရဲ့ Preference ကလည်း ပြောင်းပါတယ်။
အတိတ်တချိန်တုန်းက SUVs တွေ အလွန်ခေတ်စားပါတယ် … သူဌေးမှန်ရင် အဲ့ဒါမျိုးတွေ ပိုင်မှ စီးမှ
ဆိုတဲ့ အဆင့်လောက်ထိ … ရေပန်းစားဖူးပါတယ် ..။ (အဲ့သည့်နောက်ကွယ်က အတွေးအခေါ်က .. အနှီကားတွေက
တောတွင်းသုံး အကြမ်းသုံး တွေဖြစ်လေတော့ ..သည်ကားတွေသာ ပိုင်တယ် ဆိုရင် တောဘက် နယ်ဘက်တွေမှာပါ
မြေပိုင်တယ် လုပ်ငန်းပိုင်တယ် ဆိုတာမျိုး ကြွားပြီးသားဖြစ်အောင် ဆိုတဲ့ ဆိုက်ကို ပါ..)၊ ခေတ်ကပြောင်းလာပါတယ်..
ဆယ်လစ်ဗျစ်တီ တွေက စလို့ shape လုပ်လာခဲ့တဲ့ trend ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ သည်ဘက်ခေတ်ပိုင်း Eco ကားတွေ ခေတ်စားလာတာပါ …CO2 စွန့်ထုတ်မှု နည်းတဲ့…
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကို ပျက်စီးထိခိုက်စေမှု နည်းပါးတဲ့ ကားတွေ ခေတ်စားလာပါတယ်..
သည်တော့ သူဌေး ဆိုသူတွေလည်း …အရင်က အင်ဂျင်ပါဝါ ကောင်းတဲ့ ကားတွေ စီးလာ ဂုဏ်လုပ်လာတာကနေ
ဟေ့ ငါတို့က ခေတ်ပညာတတ် .. ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို နားလည်တဲ့ သူဌေးတွေကွ
ဆိုတဲ့ image မျိုး ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ .. သူတို့ကိုယ်တိုင် စံပြအနေနဲ့ Eco ကားတွေ ၀ယ်လာ သုံးပြလာတဲ့
ခေတ်ကို ရောက်တယ် ဆိုပါတော့ …။ အဲ့သည့်မှာ အနှီ ကားထုတ်လုပ်သူ နားကားပါတော့တယ်…။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ SUVs Product Line က ရောင်းမကောင်းတော့ပေမယ့်…
အဲ့သည့်က ဂျာတွေ ..ပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ့် ဒီပါ့မန့်ကို ကိုယ့် အလုပ်ရာထူး ကို ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့….
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ် အလုပ်မပြုတ်ဖို့ … ကန်ပနီရဲ့ ROI ကို ကိုယ့် ဒီပါ့မန့် R&D မှာ အသုံးလွန်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ…
သည်တော့ ..အချုပ်ပြောရရင် ရောင်းကောင်းနေတဲ့ Eco ဘက်မှာ ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူတွေကို မယှဉ်နိုင်
ဈေးကွက် အနေအထား ဦးမော့လာပေမယ့် ..လုံလောက်တဲ့ တီထွင် ဆန်းသစ်မှု မရှိ …မလိုက်နိုင်
မဟုတ်တဲ့ ဘက်မှာ ငွေတွေ အိပ် …. နောက်ဆုံး အိုဘားမားအစိုးရ ၀င်ကူရတာ အားလုံး အသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။
အဲ့သည့်မှာ ယနေ့ထိ အသံတွေ ညံတဲ့ ကိစ္စက …. အစိုးရဟာ …ကိုယ့်ဟာကိုယ် ညံ့လို့ …ရောင်းမှား
၀ယ်မှား ရင်းနှီးမှား တဲ့ လုပ်ငန်းစု ကြီးတွေကို ၀င်ဆယ် သင့်သလား .. သို့တည်းမဟုတ်…
စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းငယ်တွေ ကို ပိုမို ထောက်ပံ့ပေးသင့်သလား ဆိုတဲ့ အတွေး၂ခုပါ …။
အဲ့ဒါ ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်… အမေဒစ်ကင်န် လို တိုင်းပြည်မျိုးရဲ့
ထိပ်ဆုံး ဦးဆောင်သူ ရဲ့ ကုလားထိုင်ကိုပါ ချိန်းခြောက်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်…
(Young Entrepreneurs of America အကြောင်း နည်းနည်း တူးဆွဖူးတယ် မှတ်ပါတယ်..)
ဟုတ်ကဲ့ … ပြောချင်တာက
Develop Chaotics Modulated Strategy hedging risk and corresponding to key scenarios
ဆိုသည်မှာ မတည်မငြိမ် သော အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နေသော ကာလ မှာ
အသစ် ချမှတ်ပြင်ဆင် လတ္တံ့သော scenarios တွေအတွက်
လိုအပ်ရင် Enterprise ရဲ့ Organization Structure ကိုပါ ..Corporate Culture ကိုပါ
လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲ သင့် ပြောင်းလဲရမယ် … လို့ ပြောချင်လို့ပါ…
သည် စာ ၁ကြောင်းထဲ ရေးရင် နားမလည်မှာမို့ …အထက်က case study ကို
ထည့်ရေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှီ ဧရာမ ကားထုတ်လုပ်သူဟာ … ပြောင်းလဲလာတဲ့
consumer preference ကိုလိုက်လို့ … လိုက်လျောညီထွေသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်
စီးပွားပျက်ကပ်မှာ သည်လို အဖြစ်ဆိုး မကြုံဘူး လို့ ဆိုချင်ပါတယ်..။
2.1 Build EWS’s, fast response teams & procedures to align strategy planning and execution
EWS ဆိုတာ Early Warning Systems ကို ဆိုလိုပါတယ်..
IT နယ်ထဲက မာကတ္တာ တယောက်ဖြစ်လို့ … Software ရောင်းစားချင်လို့
ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး …တကယ်က အဲ့သည့် အဆင့်က MISs
(Marketing Intelligence Software) တခုခု လိုအပ်ပါတယ်…
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Database Marketing လို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့
Marketing ရဲ့ မျိုးဆက် အသစ် တစ်ခုပါ …။ စားသုံးသူ သန်းနဲ့ချီပြီး
ဆက်ဆံနေရတဲ့ လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုခုဟာ ဘယ်လိုမှ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့
အကြောင်းကို ဦးနှောက်နဲ့ အသေးစိတ် မမှတ်သားနိုင်ပါဘူး ..။ System
တခုခုရဲ့ စွမ်းအားကို ယူရ သုံးရပါတယ်..။ အော် …ဒီကတ်စတမ်မာ က
ဒီလို ရှိတယ် ..ဆိုယုံလောက် သိယုံလောက်နဲ့လည်း မပြီးပါဘူး …။
လိုအပ်တဲ့ Action ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာမျိုး …
အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်တာမျိုး လိုအပ်ပါတယ်..။
(ဆရာသမား တယောက် ပြောဖူးတဲ့ ဥပမာ ကို အမှတ်ရလို့ ချရေးလိုက်တာပါ..)
ဥပမာ တခု အနေနဲ့ …ဟော်တယ် တစ်ခု ဆိုပါစို့ …။
ဂျာမနီက လုပ်ငန်းရှင်တယောက် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အနှီ (ကမ္ဘာတန်း ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ဟော်တယ်
လုပ်ငန်းစု ) ရဲ့ ယိုးဒယား က ဟော်တယ်မှာ တည်းပါတယ် တဲ့ …။
ခြင်ကိုက်တာ ..အစားမှားလို့ ၀မ်းလျှောတာ အပါအ၀င် အဆင်မပြေမှုတချို့ နဲ့ ကြုံပြီး
ပြန်သွားရပါတယ်..။ အဲ ..အနှီလုပ်ငန်းရှင်ပဲ အမေဒစ်ကင်န် ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့
ထပ်လာဖို့အတွက် online ကိုသုံးပြီး reservation လုပ်ပါသတဲ့ …။
ဟော်တယ်ဘက် ဆိုက်မှာ နောက်ကွယ်က run နေတဲ့ system အရ ….
သည်ကတ်စတမ်မာ ဟာ ..ပုံမှန်ဖောက်သည်ဖြစ်ခြင်း ..အရင်က သည်လို
အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာ ရှိခြင်း .. စတာတွေကို သိရှိ နားလည်ပြီး သကာလ…
အဆိုပါ လုပ်ငန်းရှင် လေဆိပ်က ဆင်းတဲ့အခါ ..အခမဲ့ သွားကြိုပေးတာ ..
ဈေးနှုန်းတူ အခန်းရွေးခွင့် ….(ပူးလ်ဆိုဒ် … အရှေ့မျက်နှာမူ ..အနောက်မျက်နှာမူ စသည်)
ပေးအပ်တာ ..မျိုးတွေ လုပ်ပေးပါသတဲ့ …။ (ရှင်းရှင်းပြောရင် ..ဖားတာပေါ့ဗျာ …
မဖားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး … မားကတ္တင်းမှာ ဆိုရိုး တခုရှိရဲ့ … ဖောက်သည်ဟောင်းကို
ထိန်းရတဲ့ စားရိတ်ထက် ဖောက်သည်သစ် ရှာရတဲ့ စရိတ်က ၇ဆ ပိုသတဲ့ …)
ကုန်ကုန်ပြောရရင် …reception မှာ အချက်အလက် ဖြည့်သွင်းတုန်း …ဧည့်သည်ကို
ထိုင်စရာပေး အအေးသောက်ခိုင်း တာမျိုးကအစ အကျုံးဝင်ပါသတဲ့ ….
ဒါဆို သည်အဆင့်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်
Build EWS’s, fast response teams & procedures to align strategy planning and execution
ကို ပြန်ကောက်ရင် ..မတည်မငြိမ်တဲ့ ကာလကြီးမှာ …အထက်က ကေ့စ်လိုမျိုး
System လည်းသုံး ဖော်ဆောင်တဲ့ အဖွဲ့လည်း ရှိ …ဆိုတာမျိုး တကယ် လိုအပ်ပါတယ်…
(ဒါဟာ Value Chain နဲ့ ဆိုင်လို့ …အောက်မှာ ထပ် ပြောပါဦးမယ်ဗျို့…)
2.2 Align Individual and departmental capabilities, and performance management systems with strategy
အပေါ်က အဆင့်အတိုင်းပါပဲ … ဆက်စပ်နေတာပါ…
စစ်စတမ် ထည့်ထားလို့ …ယိုးဒယား က ကေ့စ်ကို သိခဲ့ပါရဲ့ … အမေဒစ်ကင်န်မှာ ဒါကို
ဖော်ဆောင်ပေးမယ့် အသင်းအဖွဲ့ မရှိရင် အနေအထား အခင်းအကျင်းမရှိရင် မဖြစ်ဘူး ဆိုချင်တာပါ…။
Value ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မားကတ္တင်းမှာ အတော်လေး သုံးပါတယ်..။ အဲ့ဒါ ငွေကြေး ကို
ပြောတာမဟုတ်သလို .. Quality သက်သက်ချည်းပဲလည်း ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး …။
အနှီ Value နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ .. အောက်က ပုံလေး ၁ပုံနဲ့ ..ဘယ်လို သတ်မှတ်တယ် ဆိုတာကို
Equation ဆန်ဆန် ပြောပြချင်လို့ပါ…
ဟော်တယ်ကေ့စ်ကို ထပ်သွားရရင် … ကားဒရိုက်ဘာ ရဲ့ …တံခါးဖွင့်ပေးတာက အစ…
Receptionist ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အပြုံး တချက် အဆုံး … Value သယ်ဆောင်မှု
လမ်းကြောင်း အပေါ်မှာ အလွန် သက်ရောက်မှု ရှိပါကြောင်း …။
3. Enabling and organizing
3.1 Expand, enhance and mobilize the stakeholder base
သည်အဆင့်မှာ နာမည်ကျော်တဲ့ မားကတ္တင်းမော်ဒယ် တခုကို ဆွဲပြ
ချင်ပါတယ်.. Force Field Analysis ဖြစ်ပါတယ်..။
Michael Porter ဆိုတဲ့ ဆြာကြီးတယောက် ရေးခဲ့တာပါ. …
မူလဘူတ Force Field ဖြစ်တဲ့ Five Force ကတော့
သည်ဘက်ခေတ်မှာ ရိုးရှင်းလွန်းပြီး သီအိုရီ ဆန်လွန်းတယ်…
လက်တွေ့မှာ သည့်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ရှုပ်ထွေးတယ်. ..
လို့ ပြောလာကြပေမယ့် …ခုအချိန်ထိ ချိန်ထိုးကြည့်နေရဆဲ …
မှားတယ် ပြောမရဆဲ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးခံစားသူတွေ ဖြစ်တဲ့ .. အမျိုးမျိုး အထွေထွေသော Stakeholders
တွေ အနေနဲ့ ရပ်တည်မှုကိုလိုက်လို့ .. opposite ဖြစ်တဲ့ အယူအစွဲတွေ
ရှိစမြဲပါ.. ဥပမာ ၀န်ထမ်း- လခ တိုးတာ ကြိုက်သပေါ့.။ အလုပ်ရှင်-
supplyer ရော buyer ပါ .. ခြားနားတဲ့ တောင်းဆိုမှု အသစ်တွေ
ဖြစ်ပေါ်လာမှာမို့ ..ဒါကို ယှဉ်ထိုးကြည့်ပါ ..ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဆိုတဲ့ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်..။
ဥပမာပေးရရင်…ကျနော်တို့ IT နယ်ထဲက smartphone တွေလို
high-tech: လောက ကိုပဲပြောချင်ပါတယ်… သည်ဘက်ခေတ် ၂၀၁၀
နောက်ပိုင်းမှာ smartphone တလုံးကို ၂နှစ်တိုင်တိုင် သုံးသူနည်းလာ
ခဲ့ပါပြီ..။ အသစ်အသစ်တွေ က Creative Destruction ဖြစ်တဲ့အတွက်
၁၀နှစ် အာမခံသည် ဆိုပီး မာပေ့ ကောင်းပေ့ ဆိုတာတွေနဲ့ ထုတ်တာထက်
၃နှစ်လောက် ခံရင်ကို တော်ပြီ … ပေါ့ရမယ်-ပါးရမယ်-မြန်ရမယ်
ဆိုတာကို ဇောင်းပေး ကြရမှာပါ…. သည်တော့ … Stakeholder Analysis
ကို အစပြုရမှာသည် မားကတ္တင်း ဖြစ်ပြီး … အကောင်အထည်ဖော်တာသည်
HR ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်… Finance ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် … Sales ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
3.2 Structure and flatten the organization to accelerate reaction speed and communications
Turbulence ခေတ်မှာ အဲ့သည့်အချက် က အတော်လိုအပ်ပါတယ်….
လမ်းကြောင်း ချရမှာက Marketing ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း
အကောင်အထည်ဖော်ရမှာက Upper Management ကနေ
HR ကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ သုံးလို့ .. ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရရင် …ဟော်လန်တွေရဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့
Total Football ပုံစံ ရွေ့မျော စီးဆင်းရင်း ..ကစားရမယ့် ပုံစံပါ…
သမားရိုးကျ .. CF,SF,AM,CM,DM,LB,RB,CB ဆိုသလို
ဇာတ်ထွက်သလို … ထွက်လို့ …မရစကောင်းတဲ့ ခေတ်လို့ ပြောချင်တာပါ..
flattern ဆိုတဲ့ စာလုံး အရတော့ …Matrix organization structure
ဒါမှမဟုတ်လည်း Team structure ကို သွားစေချင်တယ် လို့ သဘောပေါက်
မိပါတယ်… အထက်က ကားထုတ်လုပ်သူ ကိုပြန် ကောက်ရရင်…
ဈေးကွက်မှာ ..၀ယ်သူဟာ ဘုရင်ဖြစ်တာကြောင့် ..သမားရိုးကျ product line
နဲ့ သွားတာမဟုတ်ဘဲ … Demographic အရ သော်လည်းကောင်း
Geographic အရသော်လည်းကောင်း …လိုက်လျောညီထွေ customer
ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ နဲ့ သာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သင့်ကြောင်း
လေ့လာစမ်းစစ်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်.. သည်တော့ ..သည်အချက်ကို
သည်မော်ဒယ်က ထောက်ရှုထားတယ်လို့ လက်ခံမိပါရဲ့…။
4. Design customer interface systems and processes
တခါက အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျမဘ၀ ကျမဇာတ်ကြောင်း
အကြောင်း နည်းနည်း ကုဒ်ပါရစေ … ။
အဲ့သည့်ဆိုင်မှာ ..ကတ်စတန်မာ ဆိုင်ထဲရောက်လာလို့ …
၁၀စက္ကန့်အတွင်း eye-contact ရရမယ်… ။ ဘယ်လိုပြုံးရမယ်..
ဘယ်လို ရှင်းလင်းပြောပြနိုင်ရမယ်။ ဘယ်လောက်ထိ Demo
ခင်းကျင်းနိုင်ရမယ် ဆိုပြီး အခိုင်အမာ သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ …. ဒါဟာ စနစ်တကျ စားသုံးသူကို ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်
မားကတ္တင်းဟာ နောက်ကွယ်က နေ သုတေသန လည်းပါမယ်… လေ့
လာဆန်းစစ်မှုလည်းပါမယ့် …လမ်းကြောင်းချမှတ်မှု လုပ်ထားတာ
ဖြစ်ပါတယ်.. ။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တာတော့
sales girls တွေ ဖြစ်မပေါ့လေ… သူတို့ကို အုပ်ချုပ်သူ sales manager
ဟာ ..ရောင်းချမှု အခြေအနေ(ငွေကြေး) နဲ့ပတ်သတ်လို့ .. Finance
ဘက်ကို တင်ရပါတယ်.. အဲ … Customer ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှု
အပိုင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ရင်တော့ ..Marketing ကို report ရမှာဖြစ်ပြီး
၀န်ထမ်း တွေရဲ့ ..စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း နဲ့ ပါတ်သတ်ရင်တော့ …HR ဘက်ကို
ကို တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ပြောရရင် လိုကယ်လ် ကအလွဲလေးတွေ ပါ…။ မလိုပါဘူးလေ .. ဆိုပြီး
Marketing ကို မထားဘဲ Sales ကို သာ Sales & Marketing ဆိုပြီး
တွဲခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်… Marketing Practices ပိုင်းမှာ အတွေ့အကြုံရင့်
Sales တယောက်ဟာ စာသိ ..မသိပေမယ့် လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ..သိမှာ
တတ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ..Marketing Research ပိုင်း Marketing Strategy
ပိုင်းကတော့ ..(သီးခြား လေ့လာသင်ယူထားတာမဟုတ်ရင်) ဘယ်လိုမှ
အလိုအလျောက် တတ်မြောက်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး …။
တဖန် … Marketing သပ်သပ် Sales သပ်သပ် မထားဘဲ ..၁ယောက်တည်း
ကိုင်ခိုင်းထားလိုက်ရင် … ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အဖိုးတန် Perspective တွေ
ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်… (လူတိုင်းတော့ ကိုယ်လုပ်တာ အမှန် အကောင်း..)
မြင်တတ်ကြလို့ပါ …။ သပ်သပ်စီထားပြီး အပြန်အလှန်ထောက်ကန်
အမှီသဟဲပြုထားမယ် ဆိုရင်ဖြင့်. … ပိုမိုအောင်မြင်မှု ဆီ ဦးတည်မှာပါ…
သည်အတိုင်းလည်း ရောင်းနေရသားပဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံက နေ ခွာမထုတ်နိုင်ရင်ဖြင့်
…. ရင်လေးစရာပါပဲ … အလားတူ HR ကိုလည်း လိုအပ်သလောက်
အရေးပေးလေ့ မရှိဘဲ ..၀န်ထမ်း ကို သူဌေး ဆိုသူ ..ဒါမှမဟုတ်လည်း
Upper management ကနေ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်လေ့ရှိတာ … စီမံခန့်ခွဲလေ့
ရှိတာ..လည်း သိပ် သဘောကျစရာ မကောင်းပါ…။
ရောင်းမကောင်းဘူး… ဆိုပါတော့ … ထုတ်ကုန်ကညံ့တာလား..
ဒါဆို Production ရဲ့ တာဝန်.. (လူသိနည်း)ကြော်ငြာအား နည်းလို့လား ..
Advertising ဘက် ရဲ့ တာဝန် … ရောင်းတဲ့ Sales တွေ အရည်အချင်း
ညံ့ဖျင်းလို့လား.. Sales manager ကတဆင့် HR ဘက်ကို ဆက်သွယ်ပေတော့
ဘယ်ရာသီမှာ ဘယ်လို အခင်းအကျင်း ဘယ်ကာလမှာ ဘယ်လို Promotion
ဘယ် customer မျိုးဆို ဘယ်လို retension စတာတွေ လိုရင်တော့
သည်လို ခြားနားတဲ့ roles တွေ အပြန်အလှန် ထောက်ကန်အမှီသဟဲပြုမှ….
(ပြောရရင် မှားရင် လိုရင် …ထောက်ပြနိုင်မှ) တိုးတက်မှု ရမှာပါ..။
Sales & Marketing ကို ၁ယောက်တည်း ကိုင် …HR ကို နေရာမပေးဘဲ
အပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ် … ရှုံးတဲ့အခါ …ရောင်းမကောင်းတဲ့အခါ…
မင်းတို့ကောင်တွေ ၆၃ကို မကျဘူး ..ပြောပြီး အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဖြုတ်-ထုတ်-
သတ် လုပ်တဲ့ ခေတ်ဟာ … (တခြားဟာတွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး) ..
ဈေးကွက်မှာ လုံးဝ competitive မဖြစ်ပါဘူး …။
4.2 Design strategic behaviors for production, supply chain and distribution
ဒါလည်း .. System သုံးသင့်တဲ့ နောက်ထပ် တစ် နေရာ လို့ ပြောချင်ပါတယ်..
လယ်ဂျာ စာအုပ်လောက် (နည်းနည်းတိုးတက်ရင်) Excel sheet လောက်နဲ့
မမြင်သာတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်…။ ဟိုတနေ့က အစ်မတော် ပုခ်ျကို လက်တို့
လိုက်မိတဲ့ Dynamics သဘောတရားတွေပါဝင်တဲ့ System တွေ နဲ့အတူ
ဒါတွေကိုင်တွယ် ထိန်းကျောင်း နိုင်တဲ့အဆင့် ရှိတဲ့ … middle management
သမား တွေ သုံးစွဲရမှာပါ…။
Dynamics အယူအဆ ကို intro ရေးရရင်ဖြင့် … တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့
လူဦးရေ … ဆိုတာနဲ့ ဥပမာရေးချင်ပါတယ်. …။ ယူနစ်အနေနဲ့ ၁နှစ်
ဆိုပါတော့ … မွေးနှုန်း က ဘယ်လောက် သေနှုန်းက ဘယ်လောက်…
အဲ ..ယနေ့မှစ နောင် အနှစ်၂၀ မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ဟာ
ဘယ်လောက် တိုးလာမယ် ဘယ်လောက် လျော့ ကျသွားမယ် ဆိုတာကို
ခန့်မှန်းတွက်ချက် သဗျ..။ ခန့်မှန်းလို့ ရလာတဲ့ အဖြေ ကို ကြည့်လို့ ..
အခွန်ထမ်း က တိုးမှာလား လျော့လာမှာလား … အထောက်အပံ့ ခံယူသူက
တိုးလာမှာလား လျော့လာမှာလား …။ နောင် အနှစ် ၂၀ မှာ ပိုလိုအပ်လာမှာ
စာသင်ကျောင်းတို့ ..တက္ကသိုလ် တို့ လား ..ဆေးရုံ တို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာတို့လား..
သည်တိုးနှုန်း ကိန်းရှင် အတိုင်းဆိုရင်…ဘယ်နှနှစ် အတွင်း ဘာ တွေ ဘယ်နှခု
မလုပ်မဖြစ် လိုအပ်သလဲ …စသည်ဖြင့် …လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အလုပ်ပေါ့ဗျာ..။
ဆိုတော့ စီးပွားနယ်ပယ်မှာ ဆိုရင်လည်း …အနှီ Analysis က လိုအပ်တယ်ဗျ
လုပ်ငန်း အကြီး အသေးကိုလိုက်လို့ …သက်ဆိုင်ရာ
အဲ့ဒါတွေ လုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်…။ System သုံးတယ် ပိုမို အသေးစိတ်
စီမံခန့်ခွဲတယ် ဆိုတာကတော့ … သည်ဘက်ခေတ် .. ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားလွယ်
လွန်းတဲ့ အခြေအနေကြောင့် Response မြန်အောင် သုံးရတဲ့သဘောပါ…
အဲ့သည့် အခင်းအကျင်းမှာ မားကတ္တင်း မပါလို့ မရသလို..
မားကတ္တင်းနဲ့ ဆေးလ်စ် ဟာ ခြားနားတဲ့ Stakeholder
တွေအနေနဲ့ ခြားနားတဲ့အမြင် ရှိဖို့…လိုအပ်ပါတယ်…
ဆွေးနွေးငြင်းခုန် တိုင်ပင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ
သည်မှာ အထက်က ပုံအကြောင်း အဆုံးသတ်ပါတယ်..
ဒါဟာ မော်ဒယ် တခုရဲ့ ..အကျဉ်းချုပ် အလွယ်ကူဆုံး ပုံစံ
သာဖြစ်ပြီး မားကတ္တင်းမှာ မော်ဒယ် မူကွဲပေါင်းများစွာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နဲ့ အတွေးအခေါ်ကွဲများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်..
B2B ထဲမှာ ပိုပြီး tricky ဖြစ်တဲ့ ဟာတွေ ..အဆင့်မြင့်တာတွေ..
သည်လောက်ဆိုရင်ဖြင့် Sales နဲ့ Marketing ကောင်းကောင်းကွဲပြီ
ထင်ပါတယ်..Marketing ဟာ Advertising လည်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ…
လည်း တပါတည်း ပြောခဲ့ပါရစေ …
ဟောသည့် အောက်က ပုံ ၂ပုံကတော့ ….
မစိတ်ဖွေးပိစိ အတွက်ပါ …. အဆိုပါ ..ဆယ်သိန်း
ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ..ကြော်ငြာ အတွက် ..
တကယ်တမ်း ချရေးကြည့်ကြမယ် …စိတ်ဝင်စားကြတယ် ဆိုရင်ဖြင့်
အောက်က အချက်တွေ အဆင့်တွေကို မမေ့စကောင်းဘူး
ကျနော့် ကို မရေးကြည့်ချင်ဘူးလား ..စိတ်မ၀င်စားဘူးလား ..
မေးလာရင်တော့ .. ဟင့်အင်း ငြင်းရမှာပါ … ၂ချက်နဲ့ ရှင်းပါမယ်..
မားကတ္တင်းမှာ အသက်လောက် အရေးကြီးတာ သတင်းအချက်အလက်
အဲ့ဒါကပဲ ..ဈေးကွက်ကို shape လုပ်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိနေသလို
winning edge ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်မယ့် လက်နက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်လက်ထဲမှာ အနှီ ဒေတာ မရှိနေပါ…။ ဘယ်က ယူရမလဲ ဆိုတာလည်း
မသိပါ…။ နောက်ပြီး .. သတင်းအချက်အလက် ရမယ်ဆိုရင်တောင် ..
ဘယ်က source လည်း ဆိုပြီး ယုံဖို့ ခက်နေ relevance လုပ်ဖို့
ဒုတိယ အချက်ကတော့ ..အဆိုပါ ဆယ်သိန်း ပေးမယ်ဆိုတဲ့
အဖွဲ့အစည်း ကို မယုံကြည်လို့ ဖြစ်ပါတယ်…။
ကျနော်က အကောင်းမြင်သမားလည်း မဟုတ်သလို အဆိုးမြင်သမားလည်း
မဟုတ်ပါဘူး ..ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားပါ..ဖန်ခွက် ထဲကရေတ၀က်ကို
ဘယ်လိုမှ မမြင်ဘဲ ..ဖန်ခွက် ဆိုက်ကိုသာ ပြောင်းလဲဖို့ ..ပြောချင်သူတယောက်
တကယ်တမ်း ဒူပေဒဏ်ပေခံတဲ့ .. စိတ်ချရတဲ့ …
မလွဲမချော်နိုင်တဲ့ ..အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေပါဝင်တဲ့
Master Plan ဆိုတာ ..
အပေါ်က အဆင့်တွေလို စနစ်တကျ သွားရမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ..
Project တခုလို အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ ဖြစ်လို့..
ဆိုတဲ့ ဧရိယာ-၉ပါး လုံး cover ဖြစ်သင့် ဖြစ်ရပါမယ်..
တဖက်က ပေးတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်း အရ …
ဘယ်လောက်ငွေသုံးမယ် သုံးနိုင်တယ် ဆိုတာလည်းမပါ..
ဘယ်သူလုပ်မယ် ဘယ်ဝါလုပ်မယ် ဆိုတာလည်း မသိရ …
အကဲဖြတ်မယ့် ပညာရှင် ဆိုတာလည်း ဘယ်သူဘယ်ဝါ မပြောထား..
ယုတ်စွအဆုံး … ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာ ပိုင်ရှင်ဟာလည်း
လူလား အဖွဲ့အစည်းလား လည်း မရေးထား …
website, e-mail စတာတွေလည်း မမြင်မိ တဲ့အပြင် …
၁၀သိန်း ဆိုတဲ့ ဈေးဟာလည်း အင်မတန် ချိုသာလွန်းနေသလား
အထက်တန်းကျောင်းသား ..ကျောင်းသား အဆင့် စာစီစာကုံးလောက်
စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများ အသေအချာ စုံစမ်း စနည်းနာသင့်ပါတယ်…
အချက်အလက် မခိုင်မာ ဘူး လို့ ပြောချင်လို့ပါ…
အချိန်ကုန် ဦးနှောက်ခြောက် လက်ညောင်း ရင်မော မဖြစ်စေချင်လို့
ဟောသည့် အောက်ဆုံးကတော့ လက်ဆောင်ပါ…
နည်းဗျူဟာပိုင်း နည်းစနစ်ပိုင်း အရ တန်ဖိုး ဆိုတာကို
ဘယ်လို ဖန်တီးရယူသလဲ ဘယ်လို လက်ဆင့်ကမ်းသလဲ
အဲ့သည့်အတိုင်း လက်တွေ့မှာ တကယ် လုပ်ကြရပါတယ်…
လုပ်ငန်း သဘောကိုလိုက်လို့… ကျော်တဲ့ အဆင့် …
အလွန်အချိန်ယူ ဇောင်းပေးရတဲ့ အဆင့်တွေ ရှိပေမယ့်….
သည်သဘောအတိုင်း မသွားဘဲတော့ မနေပါဘူး လို့
ခုတလော ခရီးယာယီ များနေပါတယ်…
ဆပ်ပြာသည်လင်ပျောက် အလုပ်လုပ်နည်းနဲ့ …
ဦးလေး နိုဇိုမိနာမည်နဲ့ ရထား နဲ့ အတော်လေးကံစပ်နေလို့ပါ
စာတွေကို ရထားစီးချိန် တွေမှာ အားယားနေတုန်း ရေးပါတယ်..
ပြင်ပါတယ်.. ကော်နက်ရှင် ရတဲ့အချိန် တင်ပါတယ်..
တနေ့ ..၁၂နာရီလောက် တောက်လျောက် အွန်ဒူတီ ဖြစ်နေသေးလို့..
ရွာထဲ လှည့်ပတ် နောက်ပြောင် ..သောင်းကျန်းမနေနိုင်တာပါခင်ဗျား…
သည်တော့ သူဌေး ဆိုသူတွေလည်း …အရင်က အင်ဂျင်ပါဝါ ကောင်းတဲ့ ကားတွေ စီးလာ ဂုဏ်လုပ်လာတာကနေဟေ့ ငါတို့က ခေတ်ပညာတတ် .. ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို နားလည်တဲ့ သူဌေးတွေကွဆိုတဲ့ image မျိုး ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ .. သူတို့ကိုယ်တိုင် စံပြအနေနဲ့ Eco ကားတွေ ၀ယ်လာ သုံးပြလာတဲ့ခေတ်ကို ရောက်တယ် ဆိုပါတော့ …။
ကျုပ်ရဲ့.. နစ်ဆန်းဟိုက်ဘရစ်ကားသွားဝယ်တော့… ကားအရောင်းသမားက အဲဒီအတိုင်းပြောတယ်..။
သူဌေးတွေနဲ့..နိုင်ငံရေးသမားတွေက.. အိမ်ကားဂိုထောင်ထဲ.. ပေါ့ရ်ှကား. ဘန့်ဇ်ကားဖွက်ထားပြီး.. ဟိုက်ဘရစ်ကို.. လူရှေ့သူရှေ့… အစီးပြဖို့.. လာဝယ်ကြလို့..အရောင်းသွက်သတဲ့လေ..
သာမန်အမျိုးတူနစ်ဆန်းထက်.. ဒေါ်လာ၁သောင်းပိုပေးပြီး.. ဟိုက်ဘရစ်ဝယ်တာဟာ.. ကုန်မဲ့.. ဓါတ်ဆီဖိုးကြိုပေးသွင်းထားတာနဲ့.. တူနေတယ်လို့..
တကယ်တော့.. အကြွေးရသမို့.. ဘာမှထည့်မတွက်ပဲ.. ၀ယ်စီးလိုက်တာပါ..
လိုကယ်က ဆြာသမားတွေလည်း ..အနှီ ဟိုက်ဘရစ်တွေ လှိမ့်သွင်းနေလေရဲ့ သဂျီးရေ …
ဂရင်းချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး ..အကြောင်းပြချက်က ၁၂၀၀စီစီအောက်မို့ ..
အခွန်သက်သာတာ တကြောင်း .. ဆီအစားသက်သာလို့ အော်ပရိတ်တင်း ကိုစ့်ကျပြီး
အင်း ..မကြောက်မလန့် လှိမ့်သွင်းနေတာ ..
အဆင့်မီတဲ့ ..ဆားဗစ် စင်တာ ကမရှိသလောက်ကို ….
(သည်ရောက်တုန်း ..ကားပြင်တဲ့ ပညာသင်ပီး ၀ါ့ရှော့ ထောင်စားရင် အတော်ကိုက်မယ်ထင့်..)
ဆက်ရရင် ….အဲ့ဒါ … ပျက်ရင် ဘယ့်နှယ့် ပြင်ကြမယ် မသိ….
ဘရိတ်ဆီကုန် ဆပ်ပြာရည် ထည့်မောင်း … ကား ဆီခိုးရောင်း ….ဒိုင်ခွက်မှာ
အမှန်မပေါ်အောင် ကားဆီတိုင်ကီထဲ အုတ်ခဲကျိုး ထည့်တဲ့ ဆြာတွေနဲ့တော့ …
ကားအကြောင်း သေချာမသိလို့ ..မေးချင်လို့ပါဗျာ..
အဲ့ဒါ …ဟိုက်ဘရစ်မှာ ပါတဲ့ အပိုင်း ၂ပိုင်း က ..
ပရီကောရှင်း ယူပီး တခုဆို တခု အပီ မကိုင်ရင် …၂ခုလုံးပြိုင်ကိုင်မိရင်..
(အသိ ဂျပန်ကတော့ အားပေးရှာတယ်..)
ဆာယိုနားလ … တဲ့ …
အခုစီးနေတဲ့..နစ်ဆန်းအယ်တိုင်မာကတော့.. သာမန်အယ်လ်တိုင်မာကို.. တိုယိုတာရဲ့..ဟိုက်ဘရစ်စနစ်ယူတတ်ထားတယ်တဲ့..
နည်းပညာခက်ချက်က.. ၂၀၁၁လည်းပြီးရော.. အဲဒီအမျိုးအစားကို.. ထပ်မထုတ်တော့ဘူးတဲ့လေ..
နောက်ပိုင်းကားတွေက.. ကွန်ပျုတာတွေနဲ့ဆိုတော့.. ဂျပန်မှာကားပြင်စားလာတာ.. ၅နှစ်အထက်ရှိတဲ့..ကျုပ်လည်း..နားမလည်ရေးချ…မလည်….
အင်ဂျင်ကနေ အင်ဂျင်အောက်မှာရှိတဲ့မော်တာအကြီးစားတစ်ခုကို ပါဝါပေးပါတယ်…
အဲဒီအချိန်မှာပဲ တစ်ပြိုင်နက် ဘက်ထရီကိုလဲ ချာဂျင်လုပ်နေတယ်ဆိုပါတော့…
အဲဒီမှာ သတ်မှတ်အရှိန်ရောက်တဲ့အခါ ဘက်ထရီရဲ့အားနဲ့ မော်တာကြီးကိုစမောင်းပါတယ်…
အားကုန်ခါနီးမှာ (သို့) သတ်မှတ်အားကျသွားတဲ့အချမှာ အင်ဂျင်ကနေအားပြန်သွင်းပါတယ်…
အဲဒီမော်တာကြီးကိုပဲ ဂီယာဘောက်(စ)နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာမို့ ဒွိမျိုး (Hybrid) ရဲ့အင်ဂျင်က
သာမာန်ကား အင်ဂျင်လိုရုန်းရတဲ့အင်ဂျင်မျိုးမဟုတ်ပဲ မီးအားသာထုတ်ပေးနိုင်သော
မီးစက် (Generator)အင်ဂျင်ဆန်ဆန်မျိုးဖြစ်လို့ ဆီစားပိုသက်သာပါတယ်…
အဲဒီအပြင် တချို့အချိန်တွေမှာ ဘက်ထရီကိုသုံးနေတာဖြစ်လို့ ဆီစားနှုန်းပိုပြီးလျော့ကျစေတာပါ…
ဒါကလဲ ကျွန်တော် Honda ရဲ့ Hybrid နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်ရင်းသိထားတာပါ…
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒွိမျိုးအဓိကပြသနာက ဘက်ထရီကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်…
အဲဒီမှာ ပြသနာက အာရုံခံ (Sensor) တွေရဲ့ပြသနာပါ… အခုနောက်ပိုင်းကားတွေက မက်ကယ်နီကယ်ထက်
မက်ကယ်နီကယ်နဲ့ အီလက်ထရောနစ်ရောထားတဲ့ မက်ကယ်ထရောနစ်တွေဖြစ်နေတော့ အာရုံခံတွေအလုပ်
လုပ်သလား၊ မလုပ်သလားဆိုတာကို သိဖို့ စပါယ်ရှယ်လက်နက်တွေလိုပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက အင်ဂျင်ကိုဆီပေးတဲ့ အင်ဂျက်ရှင်းစစ်စတမ်မှာ ကွန်ပျူတာကွန်ထရိုးဖြစ်လာလို့ ပျက်ရင်မြန်မာပြည်မှဖြုတ်ဆေးပညာရှင်များနဲ့ အကြီးကြီးပြသနာတက်နိုင်တယ်…
အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာ အကြီးအကျယ်ဆုံးတော်လှန်ရေးတစ်ခုဆင်နွှဲရမယ်ဆိုပါတော့…
မက်ကယ်နီကယ်စစ်စစ် စက်ပြင်ဆရာများ စာတတ်အောင်လိုက်လုပ်ရင်လုပ် မလုပ်ရင်နောက်ပိုင်းထမင်းငတ်မယ့်ပြသနာပါ…
ပိုဆိုးတာက နောက်ဆိုစိတ်ချရသော ဆားဗစ်များတွင်သာ ကားများကိုအကုန်အကျခံပြင်ဆင်ကြတော့မယ်လို့
အနာဂါတ်မှာ အော်တိုမိုဘေးလ် အင်ဒတ်စွီ မှာ
ဟိုက်ဘရစ် ကပဲ ဦးဆောင်မလား … ဒါမှမဟုတ် ဆိုလာ လား..
ဂရင်းဒီဇယ်လား မပြောနိုင်သေးဘူး ထင်ရဲ့…
သေချာတာကတော့ ထိပ်ဆုံး ခွစ်တစ်ကယ် မာ့စ် ကို ရောက်တဲ့
ကောင်သည်သာ အင်ဒတ်စွီရယ် စတန်းဒတ် ဖြစ်ရိုးမို့ ….
သေပေးရမယ့် တခုကိုသာ ရွေးမိရင် …မားကတတ်ရှရွင့်ခ် နဲ့အတူ…
ကျွဲကူးရေပါ နားကား ဖို့ ရှိတယ် မြင်မိပါကြောင်း…။
စပ္ပလိုင်းချိန်းအတွက် အလွန်လိုအပ်တဲ့ … ကုန်ရထားတွေ
ကုန်တင်ကားတွေ အများကြီး တင်သွင်းသင့်တဲ့အချိန်မှာ
အိမ်သုံးကားတွေသာ စွတ်တင်သွင်းနေတာ …
သည်ကျွန်းပေါ်မှာ ကားအဟောင်းဆိုတာ ဟန်းနီးမွန်းခရီးမှာ
သွေးဆုံးသွားတဲ့ သတို့သမီး နဲ့ တူသမို့ …
အရှေ့ကျွန်းရဲ့ ကားသင်္ချိုင်းကြီးဖြစ်မှာကိုတော့ ..
စိုးတယ်.. စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိတော့တယ် ..ဟူ၍သာ…
“နည်းနည်းလည်း တွေးပါဦး ..ပရိတ်သတ်လည်း မေးပါဦး ဦးနှောက်နဲ့ ရေးပါဦး … ကောင်းတာတွေလည်း ပေးပါဦး.. မျက်လုံးဒေါင့်ကပ်မကြည့်ပါနဲ့ ..ခင်ဗျားအကြောင်းခင်ဗျား သိတာပဲ.. တနေ့နေ့တော့ မိမှာပဲ …. အပြောအဆို မခံမှန်း သိပါတယ်… ကျုပ်တို့က မထက်ပါဘူး ..ခင်ဗျားတို့လောက် မသွက်ပါဘူး စိတ်ဓါတ်တော့ မပျက်ပါဘူး .. လိပ်ပြာလုံလို့ မရှက်ပါဘူး …”
၀ရူး ၀ရူးနဲ့ အကြမ်းဖြင်းဖတ်သွားပါဒယ်ချင့်….
မာကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် မသိမဖြစ် ဆြာ့ ဆြာများ အသေမှာတာကတော့…
Sale or else?
SCM အကြောင်း သိရင် နည်းနည်းရှင်းပြပါလားဗျာ…
Supply Chain Management ကိုပြောတာများလား…
ဆြာရယ် နောက်ရ၀ူးနော်…. logistics ပိုင်းသိချင်တာလား
ဟုတ်ကဲ့ …အတိအကျပါပဲ ဗျာ ..
လေးတွေထဲမှာ ပီဇာလုပ်ရောင်းတဲ့ ဂိမ်းတို့
စားသောက်ဆိုင် ဂိမ်းတော့ ဆော့ဖူးမယ်ထင်ရဲ့…
အဲ့သည့် အခြေခံ သဘောတရားပါဗျာ…
Bullwhip effect ဖြစ်ကုန်တဲ့ အပိုင်းနည်းနည်း ရှုပ်သွားလို့…
အဲ့သည့် ဆပ္ပလိုင်းချိန်း မန့်နေ့ခ်ျမန့် သုတ္တန်လေးတွေ
ပြောလှည့်ပါ ဟောလှည့်ပါ …လားဂျာ …
ပျင်ညာ ကို တေရွာ ယူမတွားကြေး ရှို ….
Supply Chain Management ဆိုတော့ နဲနဲခေါင်းထောင်လာတယ်…
ကျုပ်ကလဲ Logistician ကိုး…ဟိ…
တကယ်တော့ Logistic ဆိုတဲ့အပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးခေတ်မစားသေးဘူးလို့တောင်
Logistic ဆိုတာကို သေသေချာချာ လိုကယ်ကုမ္ပဏီတွေစိတ်ဝင်စားလာတာ ၅နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာပါ…
အော်…. ခေါင်းစဉ်က self-esteem လို့ ဆိုလိုတာလား။
သိတဲ့နေရာက စပြောကြည့်မယ် ။ ၂၀၀၈ recession ကို အသိဆရာကြီးများ ပြောတာကြားဖူးတာလေးပါ။
နားလည်သလောက်ပြောကြည့်တာဆိုတော့ မှားနေရင် နားလည်မှုမှားတဲ့ ကိုယ့်အပြစ်ပါ။
ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းက ဟားဗတ်က ပါမောက်ခများက သူတို့ အသင်မှားခဲ့ကြလို့တဲ့။ သူတို့အပြစ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ငါတို့ အကျိုးအတွက် ငါတို့ ကောင်းဖို့အတွက် လုပ်ငန်းအတွက်ပဲ ကြည့်ရမယ်လို့ သင်ပေးခဲ့မိလို့ပါတဲ့ ။ Head ကိုပဲ အလေးပေးခဲ့လို့တဲ့။ Heart ကိုလျစ်လျူခဲ့တယ်ပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ ၂၀၀၉ နောက်ပိုင်းထွက် ဟားဗတ် MBA ဆင်းတွေကို သင်ရာမှာတော့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက် Head & Heart တနည်း ဦးနှောက် ရယ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရယ် တွဲပြီး လုပ်ဖို့ သင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ဥပမာလေး ပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာ ဘောင်တခုထဲက ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ တဖက်သားကို ထိခိုက်စေမယ်ဆို ဆင်ခြင်ဖို့လို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။
ခုရေးပြထားသလို မာကတ်တင်းဖခင်ကြီး Dr.Philip Kotler သုံးသပ်တာကတော့ တမူကွဲထွက်နေတဲ့ မူကွဲတခုပေါ့။ မာကတ်တာများတောင် လိုက်မမှီဘူးဆိုတော့ ကိုယ်က တော့ ပြောစရာစကားတောင် မရှိပါဘူး။
Body Shop တွေသီးသန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေး တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ရေးပြထားသလို မာကတ်တင်းမျိုး တော့ မရှိနိုင်ဘူးပေါ့။ တရားဝင် အခွဲဆိုင်မှ မဟုတ်တာ။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင် အနံ့တွေ ပြင်းပြီး သိပ်မကြိုက်ဖူး။ ဖိလစ်ပင်းတွေတော့ အတော်ကြိုက်ကြတယ်ပြောတယ်။
၁၀ လပိုင်းမှာ အခြေအနေပေးရင် အဲ့လို မားကတ်တင်းရှိတဲ့ နေရာတခုကို သွားဖြစ်မလားပဲ။
ကြုံကြိုက်ရင် သေချာလေ့လာခဲ့ပါ့မယ်။ ( သိပ်တော့လည်း မသေချာ။)
(ကျမဘ၀ကို ဇာတ်မသိမ်းပေးတဲ့ ဖားပြင်းတယောက် ရောက်လေရာအရပ်မှာ အဘိုးကြီးတွေနဲ့ပဲ တွေ့ရပါစေတော် )
EWS ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပိုက်ပိုက်ကတော့ မတတ်နိုင်ပါ။ ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် မျက်စိတော့စပ်တယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ ။ မစားရတဲ့ အသီးချဉ်ပါ့မယ်။ လိုသေးပါဘူးတော်
နောက်တခုက ၀ယ်လိုအားကောင်းပေမဲ့ လိုအပ်သလောက်ပစ္စည်းမပေးနိုင် မထုတ်နိုင်တာ(ထပ်ချဲ့ဖို့လည်း မတတ်နိုင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် )
နောက် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို နိုင်ငံခြားတံဆိပ်ကပ်ပြီး ရောင်းစားနေတာတွေ့ပေမဲ့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တာမျိုး ။
ဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ scenario analysis and planning ဟာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဘာကိုထောက်ရမလဲ အဖြေရှာဆဲ အူကြောင်ကြားနေဆဲ
Enterprise ရဲ့ Organization Structure နဲ့ ..Corporate Culture ကိုစိတ်ဝင်စားသော်လည်း တကူးတက လေ့လာနိုင်စွမ်းမရှိပါ ။ ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်မှာစိုးလို့ ။ ဒီလို ရေးပြတာကိုပဲ နို့သက်ခံစို့မယ် စိတ်ကူးတယ် ။ စိတ်ပါတဲ့တနေ့ အကျယ်ရေးလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
လောလောဆယ် Metaphor ကို စိတ်ဝင်စားနေလို့
ဒီစာကို 脳の栄養 လို့ ဖွင့်ချင်ပါတယ်။
ကျမဘွ အဆုံးသတ်လား …
ရှက်လည်း ရှက်ပါတယ် .. ရှက်လည်း ရှက်တော့ပါဘူးကွယ် ..
ဖြစ်ပုံက ဂလို … တယောက်သောသူကလေးက အဲ့ဒါတွေ သုံးတယ်..
ဆိုတော့ ..မိတ်ကပ်အကြောင်း မေးပြီး .. ဘယ်လို ကောင်းတာ ဘယ်လို အာနိသင်
ရှိတာ ..ဒါမျိုးတွေ ပြောပြပေးမယ် လို့ ဂဒိစကား ထားထားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကွယ်..
ကျုပ် ပရောဒတ် လိုင်းတွေ ရေးတော့မှာမို့ ..မေးမယ် ဆိုတဲ့ အချိန်ကျဒေါ့…
ဒင်းက ကျုပ်ကို သစ်စိမ်းချိုးချိုးသွားတယ်..
လားလား ဘယ်ဟုတ်မလဲ …ဟိုးတလောလေးက လင်ယူသွားတာ တော်ရေ …
အခု ဗိုက်တဗြဲဗြဲနဲ့ မင်ဂါဆောင်ပုံတွေ လှိမ့်တင်လို့တင် …
ဗိုက်ပူနံကား ကျက်သရေယုတ်နေပုံတွေတင်လို့တင် နဲ့ …
မခံဇားနိုင်လို့ .. အန်ဆပ်စခရိုက်လုပ်ထားလိုက်ရတယ်…
SCM အကြောင်းသိချင်သော မောင်ဂီသို့….
အချိန်ရတော့ရေးပါ့မယ်ဟယ်… အဲလိုတော့ အချွန်နဲ့မ’မ’ ပါနဲ့။ အခြေခံအားဖြင့် product တွေ end user တွေဆီရောက်အောင်ပို့ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ participate parties တွေကို manage လုပ်ခြင်းလို့သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ့ loop ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ product development, sourcing (merchandising/supplier), production နဲ့ logistics တွေပါပူးပေါင်း ပါဝင်နေပါတယ်။ SCM management level တွေဟာ ကုန်ပစ္စည်းအော်ဒါတစ်ခုတက်လာတာနဲ့ အထက်က အချက်တွေ အကုန်စဉ်းစားပြီးမှ … ဆိုပါစို့ မောင်ဂီက ပစ္စည်း အခု (၁၀၀) မှာတယ်။ ကိုယ့်မှာ Stock ရှိလား? မရှိရင် production အချိန်၊ supplier တွေဆီက ပစ္စည်းရမဲ့အချိန်၊ shipping schedule, shipping method By sea…LCL or FCL, By Air??) စတာတွေအပြင် Bank transfer စတာတွေပါထည့်တွက်ပြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်… ဟမ်မလေး မောဒယ်… သိချင်တာလေး အဆင်မပြေတာလေးရှိရင်သာပြောပါကွယ်… ပျင်းမှာစိုးလို့ သီအိုရီတွေ မပြောတော့ပါဝူး…
ကားတစ်စီးလုံး ဆင်တာကို မိနစ်ပိုင်းတောင်မကြာတဲ့ ဒေသ က SCM
အကြောင်း ခုတလော.. ဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျို့ …
SCM ဆိုတာထက်စာရင်.. သူက ထုတ်လုပ်မှုပိုင်း ပလိုဒတ်ရှင်း မန်းနေ့ခ်ျမန့်
ပိုဆန်တယ်… ခက်တာက စကုပ် အပိုင်းပဲ ….
မော်ဂျူး တခုချင်းစီ ကို ဒီတေးလ် လိုက်စားရင်လည်း ..ဖလိုး ကို သိတော့မှာမဟုတ်သလို..
ဖလိုးကို လိုက်စားတော့လည်း ..တခုချင်းစီရဲ့ … အင်ပွတ် နဲ့ အောက်ပွတ်ပဲ သိမယ်..
ပရော့ဆက်စ် မသိတော့ဘူး ဖြစ်နေပြန်တယ်…အချိန်ယူရမယ် ထင်ပါ့…။
ခမ်းနားတဲ့ အုံးနှောက်ပိုင်ရှင် ဂျာမန်တွေကတော့ ရှင်းတယ်…
သူတို့ဆီ ..၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပတော့ ဘောလုံးကွင်းတွေကို ..
ဘယ်လို ဘီယာ ဆပ္ပလိုင်း လုပ်ရင် ဘယ်လို ဘယ်လို ဆိုတာတွက်ပီး …
နောက်ဆုံး အကိုက်ဆုံး ဆပ္ပလိုင်း လုပ်နည်းကို တွေ့သွားသတဲ့ ..
အဲ့ဒါ ဘီယာ စက်ရုံကနေ …စတေဒီယံကို ..ပိုက်လိုင်းသွယ်တဲ့နည်းတဲ့…
တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ management ဘက်ကနေလည်း နားလည်မိပါတယ်။ management က တင်းကြပ်ပြလိုက်ရင် နည်းနည်းလေး လှုပ်ရှားပြတယ်။ မတင်းကြပ်ပဲ အလိုက်သင့်လေးထားပေးပြန်တော့လည်း တစ်ချို့တွေက လုပ်ငန်းအတွက်မဟုတ်ပဲ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ကျန်အောင် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ရအောင်အကြံအဖန်ထုတယ်။ ပစ္စည်းတွေပုံလာသည်အထိ အချိန်ဆွဲထားတယ်။ ပစ္စည်းကို ရောင်းထွက်အောင် အားစိုက်ပြီးမကြိုးစားဘူး။ ၀တ်တန်းကျေပဲလုပ်တယ်။ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာအတွက်ကလည်း အချိန်နဲ့အမျှပေးနေရ ဆိုတော့ management ကပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကြံအဖန်သမားတွေက သူတို့အတွက်ကျန်အောင် management ကရောင်းဈေးချပေးအောင် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးတယ်။ ရောင်းအားကျနေတယ်။ ဈေးကွက်မရှိဘူး။ ဈေးကွက်မှာ ဈေးတွေတအားကျလို့ သူများရောင်းတဲ့ဈေးမလိုက်နိုင်ဘူး စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ management ကလည်း နောက်ထပ်တက်လာမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေမရှိအောင် အမြန်ရောင်းထွက်ပြီးရောဆိုပြီး ဈေးတွေချပေးရတယ်။ ၀န်ထမ်းဘက်ကိုလည်း နားလည်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ management ကလည်း ၀န်ထမ်းကို ပေးသင့်တဲ့ခံစားခွင့်မပေးတော့ ၀န်ထမ်းအနေနဲ့ အဲလိုလုပ်ယူမှရမှာဆိုတော့ အဲဒီလိုပဲအကြံအဖန်တွေထုကြတာပေါ့။ အခြေအနေတွေက အဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်။
Sales Orientation ကနေ မထွက်နိုင်သမျှ …အဲ့လို Dumping တွေ
ပြောင်းပြန် ဖြစ်သော Channel-Stuffing တွေ ရှိနေဦးမှာ မလွဲဘူး..
Marketing Orientation ကိုသွားဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုရင်တောင်
Channel Re-defination လုပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်…။
ကျုပ် အဲ့သည့်ချိန်တုန်း ကအတွေးက တလောကအတွေးနဲ့ ထပ်တူကျနေသေးသကိုး.
ပုထုဇနော အုံမာနောကော ဆိုလား.
နောက်မရေးမယ့် စာရင်းမှာလည်း အပေါင်းတစ်
သမိုင်းဝင် စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးအကြောင်း မျှစ်ကြော်ပြုံး သိထားပုံက မတူဘဲ တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ခုမှ အူချာလည်နေပြီ။ ပိုဆိုးတာက ပို့စ်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ နာမည်တွေ အမျိုးမျိုးသုံးသွားလို့ ကြောင်သွားတာ။